Kachin Duwa: ဖွဘွတ်ပေါ်မှ အသုတ်စုံ အကြောင်း..
ကေအိုင်အေ ကိုထည့်ရေးပြီး အပုတ်ချလို့ရရင် ပြီးရော ဆိုပြီး ရေးထားပုံပဲ။
ခက်တာက မူလာရှီဒီး တံတား ဆိုတာ ဘယ်မှာ ရှိတယ် ဆိုတာ သိပုံ မပေါ်ဘူး။ ရွှီးထားတာတော့ ဟုတ်နေတာပဲ။
မူလာရှီဒီးတံတား ဆိုတာ ပူတာအိုက မူလာရှီဒီး ဆိုတဲ့ လီဆူး ရွာနားက ကြိုးတံတားပါ။ အရင်တုန်းက သာသနာပြု ဆရာ မော့စ်မိသားစု နေသွားတဲ့ ရွာ ဖြစ်ပြီး။ လီဆူး ခရစ္စတုအသင်းတော်ရဲ့ ဌာနေ အသင်းချုပ်ရုံး စိုက်ရာ ရွာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွာ ဆိုပေမယ့် ရွာကြီး။
မူလာရှီဒီး တံတား ဆိုတာ ကြိုးတံတားမို့ နာမည်ကြီးတာ။ ပူတာအို ရောက်သူတိုင်း သွားလည်ချင်စရာ နေရာလေး တခုပါ။ အဲဒီ ကြိုးတံတားနားမှာလဲ ပျော်စရာနေရာလေး ဖြစ်အောင် နားနေဆောင်တွေ လုပ်ထားသေးတယ်။
အဲဒီ ကြိုးတံတားထိပ်မှာ ဗမာ စစ်တပ် အခိုင်အမာ ရှိတယ်။ တောင်းမှ တောင်း အဲဒီ စစ်စခန်းက စစ်သားတွေပဲ ဖြစ်မှာပါ။
ကန်ပိုင်တီဆိုတာလဲ ဇခုန်တိန်ယိန်းရဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖွဲ့ရဲ့ ဒုတိယ မြို့တော်ပါ။ မြန်မာ အစိုးရ စုပေါင်းဂိတ် ရှိတဲ့ နယ်စပ် မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖါးကန့်မြို့ထဲမှာ ကေအိုင်အေ အုပ်ချုပ်တယ် ဆိုတာလဲ သူပြောမှ သိတော့တယ်။
ထင်းရူးပင် နဲ့ စတော်ဘယ်ရီ ပင် မမြင်ဘူး တဲ့ ကဗျာဆရာလို၊
"စတော်ဘယ်ရီ ပင်အောက်က ထင်းရူးမြက်ပေါ်မှာ ဒို့နှစ်ယောက် ထိုင်စကားပြောခဲ့တာ သတိရတယ်" ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေပြီ။
တင် မိုး, Myat Thu Zar, Yu Yu Nwe and 73 others like this.
Jm June မင်းတို့ အောက် အောက်ပြည်ကလူတွေကိုပဲလိမ်လို့၇မယ်
ငါတို့ကချင်ပြည်နယ်သားတွေက kia. ကမယုတ်မာဘူးဆိုဒါသိတယ်
Naw Tu Awng စစ်သားဟောင်းချင်းတူပေနဲ့ ဒီအစ်ကိုနေမျိုးဇင်တော့ လေးစားတယ်ဗျာ ပါးစပ်ကမဟုတ် လက်တွေ့လုပ်တယ် ဟန်ပြမလုပ်သတ္တိရှိရှိလုပ်တယ် ငါစစ်သားဟောင်းဆိုတာမေ့ထားပြီး လိုက်ဇာကို ရဲရင့်စွာချီတက်နေပါရဲ့ဗျာ(ဗန်းမော်မြို့ကိုရောက်ရှိပါပြီး။ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ လိုင်ဇာမြို့ကိုညနေပိုင်းရောက်ရှိပါမည်။ကိုနေမျိုးဇင်)
Roi Tawng kojohn ဆိုတဲ့လူခင်ဗျားကသိပ်ရယ်ရတယ်။ရှက်စရာကြီး။သူခိုးလူမိဖြစ်နေပြီ။ဟား.....ဟား.............
Kyaw Swar ko john ခင်ဗျားက ခွေးလိုဟောင် တဲ့စစ် ခွေးတ ကေါင် ပါ
Kyaw Swar ဘယ် စစ်သားမဆိုလေးစားကါတယ် ။koJohn လိုဟောင် တဲ့စစ် ခွေးကိုတော့ ဝှေးဘဲ
Kyaw Swar ကချင်ပြည် ရောက်ဖူးသူတိုင်း လမ်းပိုင်းဂိတ် တိုင်းမှာ kia က တခါ ပေးပြီးရင် ပြီးပြီ ပေးမဆုံးနျိင် သာစစ် တပ် ကို ဘဲဆိုသာလူတိုငိးရောက်ဖူးသွားဖူးသူတိုင်းသိတယ်ကွ။ခွေးဂျွန် ရဲ့
Posted by Du Wa at 10:53 AM